RASMI: Cristiano Ronaldo oo ka qeyb galaya semi-finalka Koobka UEFA Nations League – Gool FM
RASMI: Cristiano Ronaldo oo ka qeyb galaya semi-finalka Koobka UEFA Nations League
(Yurub) 08 Maajo 2019. Tababaraha xulka Portugal ayaa ku dhawaaqay kaddib shir jaraa’id uu kasoo muuqday maanta oo Arbaco ah inuu ugu yeeri doono Cristiano Ronaldo ka qeyb galka kulanka soo aadan ay ka ciyaari doonaan semi-finalka koobka UEFA Nations League.
Portugal ayaa ciyaari doonta kulan adag oo ay ku wajihi doonaan xulka qaranka Switzerland semi-finalka Koobka UEFA Nations League bisha soo aadan, Ronaldo ayaana ku biiri doona tababarka maalmaha soo socda.
Cristiano Ronaldo ayaa seegay kulamadii xulka qaranka Portugal uu ka ciyaaray Koobka UEFA Nations League, si uu nasiino helo kaddib koobkii aduunka 2018 ka dhacay dalka Russia.
Laakiin tababare Fernando Santos ayaa wuxuu doonayaa inuu ka faa’idaysto waayo-aragnimadiisa ku aadan kulmada noocaan oo kale ah.
Hadaba macalinka xulka qaranka Portugal ee Fernando Santos ayaa shirka jaraa’id uu maanta kasoo muuqday wuxuu ku sheegay:
“Haa, Cristiano Ronaldo wuxuu qeyb ka noqon doonaa kooxda aan ku dhawaaqi doono 23-ka bishan May”.
DEG DEG: FIFA oo Jac ku dhajisay Chelsea